ivelan'ny trano Game
New Fampirantiana drafitra
Fampirantiana sary teo aloha
Ara-nofo: Wood, gitara
Fonosana: Color Box
Taratasy fanamarinana: EN71
Marika Name: MOOKIDS
MOQ: 1000 milentika
Delivery: 45 andro
100% Eco-namana fitaovana
Safety tsy misy poizina ambonin'ny hoso-doko
Mody milalao kilalao mba aingam-panahy ny ankizy manan-tsaina
OEM mba ho voaray tsara
Mookids Toys Co. Faritany Ningbo Chian, izay manana ambony ny jeografia, ny fifandraisana.
Ny orinasa manokana ny ankizy sy ny zaza kilalao vokatra. Mizara tsara isika lafin-javatra toy ny vokatra, vidin-javatra,-barotra
Izahay tsy hanome bebe kokoa ianao safidy ary fohy kokoa ny fotoana fanaterana, fa tsara kokoa ny vokatra amin'ny vidiny mirary ihany koa
Izahay miarahaba anareo tonga soa tena hamangy ny orinasa amin'ny www. mookidstoy .com ary iaraho midinika raharaham-barotra, sady miandrandra fananganana orinasa mandritra ny fotoana maharitra fifandraisana amin'ny tsirairay
2. nekena OEM
4. Quality antoka:
Quick Lead Time: izahay nanolo-tena ho manao ny nanova ny fiainako haingana andro sy miasa mafy mba ho azo antoka ny fe-potoana.
Tsy mety resy Prices: isika miezaka hatrany mitady fomba ny fampihenana ny vola lany amin'ny famokarana, fitaterana vola, sns Farany azonao andraisan-tsoa avy aminy.
Faly izahay hanome anao ny tsara indrindra fanompoana, ary mifantoka tsara ny vokatra. Za-draharaha isika ao Etazonia miasa eo amin'ny tsena, tsena eoropeanina sy Afrika tsena, Rosia tsena. Hampifaliana nahalala fa nitarika fotoana manokana miankina amin'ny zavatra sy ny zavatra mitaky be ianao. Ny fahombiazantsika miorina mandrakariva eo amin'ny fahatakarana ny fitakiany sy ny fironana ny vokatra sy ny fivarotana.
Manaraka: Cutting Vegetable Set
Sanding ← Punching & Slotting ← Transection ← poloney ← Thickness
Laser Hetezo Wooden endrika
Adiresy: Room 2806, Block A, No. 933 Tiantong Norh Raoad, Yinzhou District, Ningbo Shina